ISikhokelo Absolute Beginner ukuba yokuHlaziya Google - China Ningbo Zhongyi Plastic
ISikhokelo Absolute Beginner ukuba nokuhlaziya Google
Ukuba awuyazi into Google Analytics na, hayi ukuba abafake kwiwebhusayithi yakho, okanye ndimmisile kodwa zange jonga data yakho, ngoko ke esi sithuba kuni. Nangona kunzima ukuba abaninzi ukukholwa, kusekho websites ukuba awusebenzisi Google Analytics (okanye nayiphi lezibalo, kuba loo nto) ukulinganisa izithuthi zabo. Kule post, siza ukujonga yokuHlaziya Google ukusuka kwindawo wayengumqalisi elililo awujonga ngayo. Kutheni ufuna ukuba, ukuba njani, ukusebenzisa njani oko, yaye workarounds zeengxaki ezibachaphazelayo.
Kutheni yonke umnini website ufuna ukuhlaziya Google
Ingaba unayo blog? Ingaba unayo website static? Ukuba impendulo ngu-ewe, enoba oyisebenzisela wena buqu okanye ishishini, ngoko ufuna Google ukuhlaziya. Nazi nje ezimbalwa imibuzo emininzi malunga website yakho ukuba uphendule unako usebenzisa ukuhlaziya Google.
Indlela abantu abaninzi tyelela iwebsite yam?
musa uhlala phi iindwendwe zam?
Ingaba Kufuneka iwebhusayithi mobile-friendly?
Ziziphi websites thumela izithuthi kwi website yam?
Ngawaphi amaqhinga zokuthengisa gquba traffic ezininzi website yam?
Zeziphi amaphepha kwi website yam zezona ethandwa?
Zingaphi iindwendwe mna ziguqulwa zibe imikhondo okanye abathengi?
njani iindwendwe zam ukuguqula ebevela phi, yiya kwi website yam?
njani ukuphucula isantya website wam?
Yintoni umxholo blog ukwenza iindwendwe zam kakhulu?
Kukho imibuzo emininzi, abaninzi olongezelelweyo ukuba Google Analytics unako ukuphendula, kodwa aba ngabo abaluleke kakhulu kuninzi website abanini. Ngoku makhe sijonge indlela ungafumana Google Analytics kwi website yakho.
Indlela ukufaka nokuhlaziya Google
Okokuqala, kufuneka i-akhawunti ukuhlaziya Google. Ukuba une-akhawunti Google ephambili ukuba usebenzisa ezinye iinkonzo ezifana Gmail, Google Drive, Calendar Google, Google, okanye YouTube, ngoko umele kumisa Google Analytics wakho usebenzisa akhawunti Google. Okanye kuya kufuneka ukuba ukudala entsha.
Oku kufuneka i-akhawunti zikaGoogle uceba uhlale ngonaphakade nokuba nguwe kuphela ukufikelela. Ungayitshintsha nanini imvume yokungena Analytics wakho Google kwabanye abantu phantsi endleleni, kodwa andifuni omnye umntu ukuba ulawulo ngokupheleleyo phezu kwayo.
incam Big: musa ukuvumela nabani yakho (umyili yakho web, web umphuhlisi, host web, SEO umntu, njl) ukudala akhawunti Analytics Google website wakho phantsi akhawunti zabo Google ukuze bakwazi "ukulawula" yona. Ukuba wena lo mntu inxalenye iindlela, baya kuthabatha data yakho Google Analytics nabo, kwaye kuya kufuneka ukuba baqale.
Misa i akhawunti nempahla yakho
Xa une-akhawunti Google, ungaya yokuHlaziya Google kwaye nqakraza Umqondiso ibe iqhosha Google Analytics. Uya kuthi emva koko wabingelela ne amanyathelo amathathu kufuneka uthathe ukuseta Google Analytics.
Emva kokuba ucofe Sign Up iqhosha, uya uzalise ulwazi website lwakho.
Google Analytics inikeza wokwehla ekucwangciseni akhawunti yakho. Nawe unokuba akhawunti Google Analytics ukuya ku-100 phantsi enye akhawunti Google. Uyakwazi ukuba ukuya ku-50 website phantsi akhawunti Google Analytics. Uyakwazi ukuba neemboniselo ukuya ku-25 phantsi website enye impahla.
Nazi meko ezimbalwa.
Imeko 1: Ukuba une website nye, ufuna kuphela akhawunti enye yokuHlaziya Google nge website enye impahla.
Imeko 2: Ukuba une websites ezimbini, ezifana enye ishishini lakho kwaye enye ukusetyenziswa yakho, ungafuna ukwenza iingxelo ezimbini, oyedwa "123Business" enye "Personal". ke uya kumisa website ishishini lakho ngaphantsi kwe-akhawunti 123Business kunye website yakho phantsi akhawunti yakho Personal.
IMEKO 3: Ukuba une amashishini eziliqela, kodwa ngaphantsi kwama-50, yaye ngamnye kubo website mnye, ungafuna wababeka bonke phantsi akhawunti Business. Emva koko i-akhawunti somntu websites zakho zobuqu.
IMEKO 4: Ukuba une amashishini eziliqela yaye ngamnye kubo has inqwaba websites, ukuba isimbuku websites ezingaphezu kwama-50, ungafuna ukubeka ishishini nganye phantsi akhawunti yayo, ezifana akhawunti 123Business,-akhawunti 124Business, njalo-njalo.
Akukho iindlela ezilungileyo okanye akulunganga ukuba kumiswe Google Analytics akhawunti-yinto nje ngumbandela ufuna ukuhlela iisayithi yakho ngayo. Ungayitshintsha nanini ukususa i-akhawunti yakho okanye iipropati phantsi endleleni. Qaphela ukuba ungenza ukususa ipropati (website) ukusuka kwenye akhawunti Google Analytics kwenye-wena ubuya kufuneka kumiswe indawo omtsha phantsi akhawunti entsha kwaye ulahlekelwe iinkcukacha zembali enazithabathayo kwipropati yokuqala.
Kuba kwisikhokelo lwabasaqalayo ingundoqo kaThixo, siza sizakucinga ukuba unayo website elinye kwaye kufuneka kwimboniselo enye (okwendalo, yonke imboniselo iinkcukacha kuphela. Ukusetha iza kukhangeleka ngolu hlobo.
Ngaphantsi oku, kuya kufuneka ukhetho ukuqwalasela apho kungabelwana data yakho Google Analytics.
Faka ikhowudi yakho yokulandela
Xa sele ugqibile, uya nqakraza i Fumana Tracking iqhosha ID. Uza kufumana i popup imigaqo yokuHlaziya Google kunye neemeko, apho kufuneka uvume. ke uya kufumana ikhowudi ukuhlaziya Google yakho.
Oku kufuneka ifakwe ngalinye kwiphepha kwi website lakho. Ufakelo iya kuxhomekeka ekubeni yintoni uhlobo website onayo. Ngokomzekelo, mna iwebhusayithi WordPress kwidomeyini yam usebenzisa Genesis Framework. Esi sikhokelo une ariya ethile ukongeza zeempendulo umbhalo ophezulu ephepheni kwi website yam.
Endaweni yoko, ukuba unalo WordPress kwidomeyini yakho, ungasebenzisa i yokuHlaziya Google ngu Yoast plugin ukufaka ikhowudi yakho lula nokuba asetyenziselwa ntoni umxholo okanye isakhelo.
Ukuba unayo iwebsite eyakhiwe iifayile HTML, uya kongeza ikhowudi yokulandelela phambi kokuba </ intloko> tag kwi ngalinye kumaphepha zakho. Ungakwenza oku ngokusebenzisa inkqubo umhleli wokubhaliweyo (ezifana TextEdit for Mac okanye Notepad for Windows), uze ukulayisha ifayile umkhosi wakho web ngokusebenzisa inkqubo FTP (ezifana asFileZilla).
Ukuba unayo Shopify e-commerce ivenkile, uya kuya izicwangciso zakho Ivenkile Online kwaye uncamathisele ikhowudi yakho yokulandela apho ekhankanyiweyo.
Ukuba une-blog on Tumblr, uza kuya blog yakho, nqakraza i Hlela iqhosha Theme kwi ekunene phezulu blog yakho, uze ufake nje yokuhlaziya Google ID ekufakweni zakho.
Njengoko ubona, ukufakelwa Google Analytics kuyahlukana isekelwe eqongeni oyisebenzisayo (inkqubo yolawulo umxholo, website umakhi, isoftwe ye-commerce, njalo-njalo), umxholo oyisebenzisayo, kwaye iplagi ozisebenzisayo. Kufuneka ube nako ukufumana imiyalelo kulula ukufaka Google Analytics nakweyiphi website ngokwenza uphendlo web ngenxa iqonga lakho + indlela yokufaka Google Analytics.
Emva kokuba ufake ikhowudi yakho yokulandela kwi website yakho, uya kufuna uqwalasele ezincinane (kodwa iluncedo kakhulu) ndihleli website lakho iprofayile ku ukuhlaziya Google. Oku Usukelo lwakho sentlalo. Ungafumana kwakhona ngokunqakraza kwi link Admin phezulu kwe Google Analytics bakho uze ucofe kwi Usukelo phantsi website yakho View column.
Usukelo kuya kuthi Google Analytics xa kukho into ebalulekileyo eye yenzeka kwi website yakho. Umzekelo, ukuba unemouse website apho uqalisa enqumla ifomu contact, uya ufuna ukufumana (okanye yenza) i enkosi iphepha ukuba iindwendwe liphela zakuba zingeniswa iinkcukacha zazo zoqhagamshelwano. Okanye, ukuba une website apho uthengise iimveliso, uya ufuna ukufumana (okanye yenza) i wokugqibela enkosi wena okanye iphepha isiqinisekiso ukuba iindwendwe ezweni phezu zakuba zigqityiwe ukuthenga.
* Prince: Nceda ukhethe i Tree
ixesha Post: Aug-10-2015